EMA - MT5 egosi
Home MT5 egosi EMA
Omuma Ebube na-agagharị agafe na ike iji ezigbo ọnụ ọgụgụ dị ka oge nkezi.
The egosi eji SmoothAlgorithms.mqh n'ọbá akwụkwọ na klas (a ga-depụtaghachiri ka terminal_data_folder MQL5 Gụnye). The ojiji nke ọmụmụ nke ọma ihe a kọwara isiokwu “Atụmatụ ọnụahịa ego maka ọnụọgụ etiti na-enweghị mgbakwunye mgbakwunye”.
EMA is a Metatrader 5 (MT5) egosi na ọdịdị zuru oke nke Forex egosi bụ ịgbanwe akwakọba akụkọ ihe mere eme data.
Copy EMA.mq5 to your Metatrader Directory / ọkachamara / egosi /
n'isiokwuGbanwee agba nke kandụl ahụ
isiokwu na-esonụiAlligator HTF